NTT Myanmar Gears Up to Offer ICT Enterprise Solutions | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance NTT Myanmar Gears Up to Offer ICT Enterprise Solutions
NTT Myanmar Gears Up to Offer ICT Enterprise Solutions
NTT Myanmar, the Yangon-based affiliate of international technology service provider NTT Ltd., has securedabusiness-to-business wholesale license from the Ministry of Commerce to offer information and communications (ICT) solutions and managed services to enterprise clients in Myanmar.
Obtaining the license constitutedacrucial step for NTT Myanmar to scale its operations and enhance efficiency in delivering digital solutions that meet the needs of Myanmar’s booming ICT sector, which has been growing at 6-12 percent annually.
“The opening of our new affiliate office reflects our commitment to deliver intelligent, end-to-end solutions to our clients in Myanmar as the nation charges forward with its digital transformation roadmap,” said Sutas Kongdumrongkiat, NTT’s CEO for Thailand, Cambodia, Laos and Myanmar.
“I am confident that our deep expertise in technology and strong capabilities in systems integration will drive transformational growth for businesses and foster greater economic progress for the country,” he added.
Beyond the ICT sector, NTT Myanmar aims to support organizations across educational and financial sectors and develop related human resources to keep up with smart innovations and enhance their learning abilities and access to the digital world.
NTT employs more than 40,000 people and delivers services in over 200 countries and territories.
NTT Ltd., သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် NTT Ltd.,သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် NTT Myanmar Co., Ltd ကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဖြေရှင်းချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနမှ business-to-business လက်ကားရောင်းချခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်(wholesale license)ကို ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ကားရောင်းချခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်(wholesale license)ကို ရရှိထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကဏ္ဍ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြေရှင်းချက်များကို အရှိန်အဟုန်မြင့် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရယူနေတဲ့ client လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း အစဉ်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်နေရပါတယ်။ NTTအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံးခွဲစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ စနစ်တကျ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကနေတစ်ဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ယူဆောင်လာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွက်လည်း အကျိုးရှိစေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု NTT Ltd၏ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Sutas Kongdumrongkiat က ပြောသည်။
NTT Myanmarသည် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍများသာမက ပညာရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍများမှ အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် နည်းပညာသစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပိုမိုလေ့လာဆည်းပူးနိုင်ရန် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပိုမိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
NTT Ltd. သည် ဒေတာကူးပြောင်းမှု၊ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အဓိကလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၀၀၀၀ကျော်ဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ကျော်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။
Previous articleGems, Jewelry Sellers Subject to3Separate Taxes
Next articleFintech Challenge Aims to Drive Financial Inclusion